Ukunakekelwa Kwekhasimende + - Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
U-Hebei Shenli uzibophezele ekwenzeni ngcono okuqhubekayo emikhiqizweni nasezinsizakalweni esizinikezayo, futhi silwela ukuhlangabezana nezidingo eziphakeme kakhulu zamakhasimende ethu. Ukuqinisekisa izidingo zabasebenzisi bemikhiqizo yethu ziyaneliseka, singathanda impendulo yakho noma kunini. Ngalesi sizathu, inkampani yethu iqale isu lokunakekelwa kwamakhasimende kanye nensizakalo.
Inkampani yethu ihlala ikholelwa ukuthi thina namakhasimende ethu "singumphakathi wesiphetho esabiwe". Ukusebenza ngokubambisana kuzosenza sobabili sibe ngcono futhi kube nokubambisana kokuwina.
Sinezinsizakalo ezintathu ezihlukene kucebo lethu le- "Customer Care +".
1. Sinikeza amakhasimende ethu ngokugcwele zonke izindawo zokuhlola mahhala njengeqembu lesithathu lokutshala imali ukuwasiza ukuthi acubungule neminye imikhiqizo adinga ukuyivivinya ekhaya.
Ngonyaka owodwa "Isiqinisekiso Sekhwalithi Ngemuva Kokuthengisa Insizakalo" yazo zonke izimpahla zethu. Futhi ikhasimende lethu lingathola futhi insizakalo eyengeziwe lapho kungaphezu kwesikhathi sokuqinisekisa futhi sizimisele nokubasiza ukuxazulula yonke inkinga yabo;
3. Lapho izimpahla zethu zinenkinga yekhwalithi, inqubo izoba ngale ndlela elandelayo:
A.sizokhumbula amanye amasampula aleyo nqwaba yezimpahla ukuze sicubungule yonke inqubo yokuhlola futhi. Kubandakanya ukuhlolwa kwempahla eluhlaza, ukuhlolwa kobulukhuni, ukwephulwa komthwalo wokuhlolwa kokuqina nokuhlolwa kokukhathala.
B. Lapho amasampula edlulisa konke ukuhlolwa okudingekayo futhi ekhombisa ukusebenza okuhle. Sizohlaziya uma ngabe umsebenzisi anemikhiqizo yokusebenzisa ngendlela efanele futhi sizonikeza isiphakamiso ngokufanele.
4.Uma inkinga ingeke ixazululwe ngesinyathelo se-aboved, inkampani yethu izothumela abasebenzi bezobuchwepheshe enkampanini yakho futhi ixazulule yonke inkinga ubuso nobuso.